Ahoana ny fomba hampiharana fitoniana amin'ny alika | Tontolo alika
Ahoana ny fomba fampiharana am-pitoniana ao amin'ny alika
Misy maro alika taitaitra, na miambina noho ny toe-javatra sasany. Izany rehetra izany dia mety hiteraka olana ara-tsaina sy fanahiana. Ny haavon'ny asa tsara dia tsara ho azy ireo, satria mavitrika izy ireo, mihetsika ary mankafy ny tenany, saingy ny fitaintainana dia tsy tokony hiafara amin'ny fanahiana izay tsy hainy ny mitantana, ary izany no ilana hampiharana fitoniana miaraka amin'izy ireo.
Misy ny alika izay toa tsy azo atao mihitsy ny fahefana mampihatra fitoniana, saingy tsy maintsy ataontsika amin'ny toe-javatra maro sy mandritra ny andro izany, isaky ny afaka manao izany isika. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho tsapantsika fa tsy manana fanahiana be intsony ilay alika. Misy hevitra tsotra vitsivitsy izay afaka manampy antsika na dia tsy manana fiheverana fanofanana aza isika.
Mampahasosotra azy ireo bebe kokoa ny hetsika fanenjehana ny baolina na kilalao, satria mamoaka ny filan'izy ireo mihaza. Amin'ity tranga ity, raha te hitazona azy ireo tsy hitebiteby isika, dia afaka mitarika ilay hetsika mankany amin'ny fofona. ny lalao fofona tsara kokoa izy ireo, satria mitaky ny fifantohanao ary mampitony anao izany. Ny lalao mavitrika kokoa dia tsara kokoa ho an'ny fiandohan'ny andro, ary ny hafa ho an'ny tolakandro, mba ho tony kokoa izy ireo rehefa mody.
Raha mikolokolo azy isika dia tsy maintsy mampita fitoniana. Voaporofo fa raha manotra ilay alika isika ary mikolokolo azy tsy misy fitsaharana, miaraka amina hetsika lava dia mampihena be azy ireo izany. Hafa ihany raha mikopakopaka azy isika amin'ny fikapohana azy, satria toy ny fambara ho azy ireo ilay izy. Mampita ny toe-tsaintsika manokana amin'ny alika isika, ary noho izany, raha irintsika ho tony ny alika, ny zavatra voalohany dia milamina ihany koa isika.
Raha fantatrao fa mitebiteby ilay alika noho ny toe-javatra sasany, na noho ny tabataban'ny fifamoivoizana na ny tabataba mafy, ny fampielezana tsikelikely sy voafehy dia hahatonga azy io tsy ho sosotra intsony rehefa mandeha ny fotoana. Io ilay fahazarana izay hanampy anao ho tony kokoa eo imason'ireo zavatra nampatahotra azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba fampiharana am-pitoniana ao amin'ny alika
Ahoana ny fomba hampitoniana alika kely mitomany
Ahoana no hifehezana ny fitaintainana amin'ny alika